admin – Jagaran
सुर्खेत, २ असोज (जागरण) । हुम्लाको सर्केगाड गाउपालिकाले यो चालुआर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधारलाई प्रथामिकता दिएको जनाएको छ । कर्णाली रैबारसँग कुराकानी गदै गाउपालिकाका उपाध्यक्ष जोशी धामीले सबै क्षेत्रमा समस्या भएको भन्दै पहिलो प्राथामीकता भौतिक पूर्वाधार भएको बताउनुभयो । भौगोलिक अध्यन नगरेर बजेट विनियोजन गर्ने प्रविधिले काम गर्न समस्या भएको भन्दै उहाँले आगामी बर्षदेखि ठाँउको अध्यन […]
सुर्खेत, २ असोज (जागरणं) । कर्णालीमा प्रचुर मात्रा जल, जमिन र जडीबुटी र स्याउ लगायतका कच्चा पदार्थको उत्पादन प्रसस्त छ । यस प्रदेशमा उद्योग स्थापना गरि यहाँ उत्पादन हुने सम्पूर्ण वस्तुहरुलाई प्रशोधन गरी अन्य देशमा निर्यात गर्ने भनेर भाषण गर्ने गरिन्छ । तर व्यवहारमा त्यस्तो लागु हुन सकेको छैन् । अहिले देश संघिय संरचनामा गइसकेर […]
खड्क सुनार मुगु, २ असोज (रेडियो सौर्यदय) स्थानीय सरकार संचालन भएको ३ बर्ष शुरु हुँदा समेत मुगुका अधिकांस गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिन सकेको छैन् । जिल्लाको एक मात्र छायाँनाथरारा नगरपालिका भित्र रहेका सदमुकाम गमगढी बजार भित्र अझै पनि सवारी साधन सञ्चालनमा हुन ुसकेको छैन । भौगोलिक विकटता र व्यवस्थिीत ठाउका कारण अझ सम्म पनि सवारी […]
कालि बहादुर थापा हुम्ला, २ असोज (रेडियो श्रीनगर) हुम्ला जिल्लाको ताँजाकोट १ का टेक बहादुर खड्काको खोलामा चिप्लीएर मृत्यु भएको छ । भाद्र ३१ गते दिउसो घट्ीस्न गएको अबस्थामा खोलामा नुहाउने क्रममा चिप्लीएर खोलामा खोलामा खसेका स्थानीय जगत शाहीले जानकारी दिनु भएको छ । बुधबार करिब २ बजे तिर खड्कालाई खोज्न ताँजाकोट गाउँपालीका,अस्थायी प्रहरी पोष्ट […]
बुद्धि पुन सल्यान, १ असोज (रेडियो राप्ती) । सल्यान जिल्ला अस्पतालले दन्त सेवा शुरु गरेको छ । लामो समयको प्रयास पछि जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक दन्त सेवा शुरु गरिएको हो । सल्यान जिल्ला अस्पतालमा नै दाँतका बिरामीहरुको उपचार हुन थालेपछि नागरिकहरु खुसी भएका छन् । दाँतको उपचारको लागि सुविधा सम्पन्न ‘डेण्टल चियर’ राखिएको छ । […]
कालिकोट, २ असोज (रेडियो चंखेली) । सडक संज्जाल जोडिएपछि कालिकोटमा खाद्य संस्थानको चामल उपभोग गर्नेको संख्यामा कमी आएको छ । स्थानीय बजारहरुमा संस्थानको भन्दा स्तरीय चामल सबैतिर उपलब्ध हुन थालेपछि संस्थानको चामल उपभोग गर्नेको संख्या घट्दै गएको हो । कर्णाली राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै कालिकोटका ग्रामीण भेगसम्म सडक जोडिएपछि गाँउघरमै स्थानीय व्यापारमा वृद्धि भएको छ । बढ्दो […]
सुर्खेत, २ असोज (जागरण) । कर्णाली प्रदेशले विपत द्ुर्घटना कार्यक्रम शुरु गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले आज एक कार्यक्रमकाबिच शुभारम्भ गर्नुभएको हो । उहाले विपदको उच्च जोखिममा रहेको कर्णालीका नागरिकले हरेक वर्ष ठुलो संख्यामा मृत्यु हुनुपर्ने अवस्थालाई हेरेर सरकारले राहात स्वरुप विमा कार्यक्रम शुरु गरेको वताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले विमा रकम हेर्दा सानो […]
भौतिक पूर्वाधारलाई प्रमुख प्राथामीकतामा राखेका छौः अध्यक्ष रावल
सुर्खेत, १ असोज (जागरण) । जुम्लाको सिजां गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य लगाएयका सबै क्षेत्रलाई समेटेर यो चालु आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गरेको जनाएको छ । कर्णाली रैबार सगँकुरा गदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवल सिंह रावलले पहिलो वर्षका पुरा नभएका भौतिक विकासका योजनाई पुरा गरेर नया योजनालाई समयमै सक्ने गरि अगाडि बढेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ, शिक्षा,कृषि […]
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर औद्योगोगिक क्षेत्रको लागि जग्गा अभाव भएको छ । सुर्खेत, १ भदौ (जागरण) । २०६८ सालमा स्थापना भएको यस औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गा अभाव भएको हो । साना उद्योगहरुको संख्या बढ्दै गएको भन्दै औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहले कर्णाली प्रदेशमा नयाँ जग्गाको पहिचान गरि औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । वीरेन्द्रनगर उद्योग विकास कार्यालयका […]
कर्णाली रैबार २०७६/०६/०१(विहान)
नमस्कार तथा शुभप्रभात् ! आज मिति २०७६/०६/०१(विहान) जागरण एफ. एम. को उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा रहेका २२ सामुदायिक रेडियोमार्फत प्रशारण हुने कर्णाली रैबार । सुन्नुहोस् अडियो: